Ururka Al-shabaab oo Soomaalida ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dagaalada lagu difaacayo Islaamka – Radio Daljir
Agoosto 9, 2013 3:30 b 0
Baraawe, aug 9, 2013 – Hugaamiyaasha kooxda Al-shabaab ayaa weli bulshada ku dhiiri-gelinaya in ay ka qeyb qaataan dagaalada ka dhanka ah howgalka taageerada Soomaaliya ee AMISOM, madax ka tirsan kooxdaasi oo bulshada kala qeyb gashay salaadii ciida ayaa ku baaqay dagaal hor leh.
Sheikh Fu?aad Axmed Shangole oo kumanaan dadweyne ah kula tukaday degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo calanka Islaamka, taasi oo ah muhiimada ugu weyn ee kooxda Al-shabaab ay u dhisan tahay.
Sheikh Shangole ayaa si kulul u weeraray Maraykanka iyo Faransiiska isagoo yiri ?Dhamaanteen waxaa nalaga doonayaa inaan qaadanno hubka oo aan difaacno raayada Islaamka, Alle idinkiisna way jabayaan kuwa ka soo horjeeda oo ay ugu horreeyaan Mareykanka iyo Faransiiska,?
Docda kale wuxuu sheegay in ay jabi doonaan ciidamada AMISOM ee jooga dalka Soomaaliya kuwaasi oo uu sheegay in ay yihiin kuwa soo duulay, Fu?aad Shangole ayaa yiri ?? Waxaa ?loo baahan yahay inaan dhabarka loo jeedin oo laga hortago, taas ayaana sharaf iyo cissi ku gaari karnaa haddii aan nahay Muslimiin,?
Ururka Al-shabaab ayaa labadii sano ee ugu dambeysay laga saaray deegaanno fara badan oo ku yaalla bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya, waxaase kooxdan ay weli awood u leedahay inay weerarro ka geysato magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada Midowga Afirka iyo dowladda Soomaaliya.
Magaalada Bosaaso oo maanta siweyn looga ciiday(Sawiro)